နိုင်ငံခြားရေးမှတ်တမ်း - အခြားတိုင်းပြည်များထံမှလွှဲပြောင်းခရက်ဒစ် | USAHello
နိုင်ငံတိုင်းဟာကွဲပြားခြားနားသောကျောင်းစနစ်ရှိပါတယ်. You might not be able to use your degree from home when you move. Learn how you can get your foreign transcripts evaluated so you can apply your education from another country when you arrive in the USA.
If you want to start school in the USA, သင်သင့်အိမ်နိုင်ငံတွင်တယ်ဘယ်အရာကိုပညာရေးကိုပြသရန်လိုအပ်မည်. You will need to have your foreign transcripts evaluated. Employers may ask about your diploma too. သို့သော်သင်သည်သင်၏နေအိမ်တိုင်းပြည်တစ်ဒီဂရီသို့မဟုတ်လက်မှတ်ကိုရှိလျှင်ပင်, သင်သည်သင်၏ဟောင်းများကိုအလုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ဖို့ပိုအတန်းသို့မဟုတ်စမ်းသပ်မှုယူဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်.
Transcript –apaper that lists what classes you took in high school or college. သူတို့ဘွဲ့ရပြီးနောက်လူအများစုဟာသူတို့အရ. သငျသညျအများအားဖြင့်သင့်ကျောင်းကနေပိုပြီးနိုင်ငံခြားမှတ်တမ်းအမိန့်နိုင်ပါတယ်.
ပညာရေးဆိုင်ရာအကဲဖြတ် – an evaluation done byacompany which translates and researches your transcript. They decide if the education you got in your country is the same or similar as in the United States.
School credits – အမေရိကန်ကျောင်းများနှင့်တက္ကသိုလ်များခရက်ဒစ်စနစ်ကိုအသုံးပြု. ခရက်ဒစ်တစ်ခုချင်းစီလူတန်းစားသို့မဟုတ်သင်တန်းဖို့တာဝန်နံပါတ်များဖြစ်ကြောင်း. Classes may received 1, 2,3or even4ခရက်ဒစ်. သငျသညျဘွဲ့ရခြင်းမပြုမီ, you need to earnacertain amount of credits.
ဒီဂရီ –adiploma fromauniversity or college.
If you apply for an unskilled job, သင်သည်သင်၏ပညာရေးသက်သေပြရန်မလိုအပ်ပေမည်. သငျသညျအကဲဖြတ်သင့်ရဲ့နိုင်ငံခြားမှတ်တမ်းမလိုအပ်ပါဘူးလိုလျှင်, သငျသညျအကဲဖြတ်အခကြေးငွေအပေါ်ပိုက်ဆံကယျတငျနိုငျ. But some jobs pay more if you haveahigh school diploma orauniversity degree.
သင်တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အနေအထားလျှောက်ထားနေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျကျိန်းသေသင့်ရဲ့ဒီဂရီအကဲဖြတ်ရသင့်တယ်. Get started as soon as you can, because evaluations can takealong time.
ပဌမ, သင့်ကျောင်းကနေမှတ်တမ်း get. ထိုအခါမှတ်တမ်းအကဲဖြတ်ကုမ္ပဏီကတင်သွင်း. You can getacourse-by-course evaluation ofageneral evaluation.
အဆိုပါမှတ်တမ်းဆန်းစစ်သုံးသပ်သူသင်တဦးတည်းအားဖြင့်တဦးတည်း ယူ. , အပေါငျးတို့သအတန်းကြည့်ဖို့နိုင်ငံခြားမှတ်တမ်းမှာကြည့်. They are looking to see if the classes you took are similar to the ones you need in the USA. သငျသညျကောလိပ်မှလျှောက်ထားရန်လိုတဲ့အခါဤအမှုကိုပြုသောဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့် $ 150- $ 200 ကုန်ကျ.
The transcript evaluator looks at foreign transcripts to see if the degree you have from your home county is the same asadegree in the USA. သငျသညျအလုပ်အကိုင်များလျှောက်ထားကြသောအခါဤသည်များသောအားဖြင့်ပြု. ဒါဟာန်းကျင်ကုန်ကျ $400.
The school you attended may have closed, or it could be in an area that is not safe. တစ်နည်းနည်းဖြင့်, you might not be able to get your school transcript. သငျသညျအလုပျအတှကျတစ်ဦးမှတ်တမ်းရယူရန်ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင်, explain the situation to the company’s human resources department. ဒါကြောင့်ကျောင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်, သင့်ရဲ့ပြဿနာနှင့် ပတ်သက်. ကျောင်းဝင်ခွင့်များဦးစီးဌာနကိုပဌနာ.
You may learn that you need to take more classes to complete your degree in the USA. This can be very frustrating. ဒီအကြောင်းပြချက်ရှိကွောငျးကိုအောကျမေ့. ဥပမာ, အီရတ်အတွက် architect နဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိထားတဲ့ဗိသုကာတူညီသောအလုပ်ပြုအံ့. သို့သော်သင်ယူဖို့ကွဲပြားခြားနားသောစည်းမျဉ်းများရှိပါသည်.
သင်သည်သင်၏တိုင်းပြည်တွင်ပညာရေးအများကြီးယူမယ့်အလုပ်ရှိခဲ့ပါလျှင်, သငျသညျဖြစ်ကောင်းအသစ်တစ်ခုကိုလက်မှတ်ရတဲ့သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအတန်းကိုယူပြီးအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်. ဆရာဝန်များ, ရှေ့နေတွေ, နှင့်ဆရာအပေါငျးတို့သညျဤဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်. ဒီဂရီလိုအပ်မအလုပ်အကိုင်များများအတွက်, သငျသညျသစ်ကိုလက်မှတ်မလိုအပ်စေခြင်းငှါ. သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုသင်အလုပ်လုပျနိုငျကိုပြသရုံနဲ့မလုံလောက်ပါလိမ့်မည်.
သင်သည်သင်၏အကဲဖြတ်ရလဒ်များကိုအကြောင်းကိုရှုပ်ထွေးနေဆဲနှင့်ပိုပြီးအကူအညီလိုလျှင်, သင်အကဲဖြတ်လုပ်ခဲ့တယ်သူကုမ္ပဏီဆက်သွယ်နိုင်သည်. သင်တို့သည်လည်းကျောင်းတိုင်ပင်နှငျ့တှေ့ဆုံနိုငျသညျ. သူတို့ကသင့်ရဲ့အကဲဖြတ်ဖတ်ပါနှငျ့သငျယူဖို့လိုအပ်သောအရာကိုအတန်းသင်ပြောပြလိမ့်မယ်ကူညီပေးပါမည်.
There are many companies online that say they evaluate transcripts. Be careful! Some of them are scams. You might get your personal information or money taken from you. But there are honest companies you can use, ကဲ့သို့ ကမ္ဘာ့ဖလားပညာရေးန်ဆောင်မှုများ, ပညာရေးဆိုင်ရာအကဲဖြတ်န်ဆောင်မှုများ, နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာယုံကြည်စိတ်ချရသော Evaluators မှ Inc မှ.